के हो कोरोना भाइरस, यसबाट कसरी बच्ने ? - Jhilko
के हो कोरोना भाइरस, यसबाट कसरी बच्ने ?
संसारभरि तीब्र रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरससँग नेपाल नराम्रोसँग फसेको छैन । तर, नेपालमा कुनै पनि बेला यसले भयावह रुप लिनसक्ने भन्दै व्यापक सतर्कता अपनाइएको छ ।
हाम्रो छिमेकी देश चीनले कोरोनाका विरुद्धको लडाईंलाई लगभग जितेको छ र भारतमा यसले महामारीको रुप लिनसक्ने सम्भावना औंल्याइएको छ । नेपालमा कुनै पनि बेलामा बिस्फोट लिनसक्ने कोरोनाका बारेमा जान्न धेरै जरुरी छ । कोरोना भाइरस, भाइरसको यस्तो परिवार हो, जसको संक्रमणबाट ज्वरो आउनुका साथै श्वास लिन कठिनाइ पर्दछ । यस भाइरस यसअघि कहिल्यै देखापरेको थिएन ।
यस भाइरसका संक्रमण डिसेम्बर २०१९ मा चीनकाृ वुहान शहरमा सुरु भएको थियो । डब्लुएचओका अनुसार यसको संक्रमणपछि ज्वरो, खोकी र श्वास लिनका लागि कठिन हुन्छ । आजसम्म यसलाई रोक्ने कुनै खोप बनेको छैन । यसको संक्रमणसँगै ज्वरो, श्वास लिनै कठिनाइ, नाकबाट सिंगान बग्ने र गला अबरुद्ध आदि हुने समस्या हुन्छ ।
यो एक व्यक्तिबाट अर्काे व्यक्तिमा सर्ने भएकाले धेरै सतर्क हुनुपर्छ । सरकारले कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि दिशानिर्देश गरेको छ । यसका अनुसार हात साबुनबाट धुन आवश्यक छ । अल्कोहल आधारित पदार्थ पनि प्रयोग गर्न सकिने विज्ञहरुले भनिरहेका छन् ।
खोक्दा र हाच्छ्युँ गर्दा नाक र मुख रुमाल वा टिस्यु पेपरले छोप्नुपर्छ । जुन व्यक्तिलाई रुघा वा कुनै फ्लुको लक्षण रहेको छ भने टाढै रहनुपर्छ । अण्डा, मासु जस्ता खानेकुरा जताततैको प्रयोग नगर्न पनि कतिपयबाट सुझाव छ । जंगली जनावरसँग टाढै रहन पनि भनिएको छ । भीडभाड र अनावश्यक घरबाट ननिकल्न पनि भनिएको छ । सतर्कता धेरै अपनाउनु पर्छ, यसको अर्थ तर्सिएर हातगोडा नै तानेर बस्नु चाहिं हुँदैन ।
माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्स बोर्डबाट हटे
फ्रान्सका पहेलो भेस्टधारी प्रदर्शनकारीद्वारा कोभिड–१९ प्रतिबन्धको अवज्ञा